ट्रोल बनिरहेका पललाई सुदर्शनको सटाएर ! « Ramailo छ
ट्रोल बनिरहेका पललाई सुदर्शनको सटाएर !
समय : 11:13 am
युवा पुस्तामाझ चर्चित नायक पल शाह केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनिरहेका छन् । दुई चार जनाले मात्रै फिल्म क्षेत्रलाई धान्न सक्दैनौं भनेर पलले दिएको अन्र्तवार्ताको क्लिप्स केही दिनयता भाइरल बनिरहेको छ ।
पलको यो भाइरल अन्र्तवार्ताको क्लिप्स थुप्रै फिल्मकर्मीले सेयर गर्दै फेसबुकमा स्टाटस गरिरहेका छन् । यस्तैमा ‘म मस्तो गीत गाउँछु’ मा हिरो लिएका निर्देशक सुदर्शन थापाले पनि पलको उक्त क्लिप्स आफ्नो फेसबुकको टाइमलाइनमा सेयर गरेका छन् । निर्देशक थापाले पलको उक्त क्लिप्स सेयर गरेसँगै चोटिलो स्टाटस पनि लेखेका छन् । ‘फिल्म बोल बच्चन भएर चल्दैन अभिनयले चल्छ याद गर्नु !’ निर्देशक थापाले लेखेका छन् । निर्देशक थापाको यो स्टाटस सिधैं पललाई हो ।
अन्र्तवार्तामा पलले फिल्म क्षेत्र माथि लैजान आफुहरु जस्तो दश बाह्र जना नायकको खाँचो परेको भनाई राखेका थिए । जुन भनाईको यतिबेला फिल्मकर्मीले आ-आफ्नै तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।